တိုင်းရင်းသားအသံ တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်အသံများ	ဗမာစစ်တပ်ဆိုတာ	October 14, 2009
၁။သင်တို.စစ်တပ်မဟုတ်ဘူး၊၂။သင်တို.လူမျိုးကိုသတ်ဖြတ်နေတယ်၊၃။သင်တို.လူမျိူးကိုအကာအကွယ်ပေးဖို.ဖွဲ.တည်ထောင်ထားတဲ့စစ်တပ်မဟုတ်ဘူး၎။သင်တို.သမီးတွေကိုမုဒိန်ကျင့်နေတယ်၊ဖျက်ဆီးနေတယ်၊၅။သင်တို.စာပေးယဉ်ကျေးမှုတွေကိုပပျောက်အောင်စနစ်တကျလုပ်ဆောင်နေတယ်၊၆။သင်တို.ဘို.ဘွားစဉ်ဆက်တွေပိုင်တဲ့ခြံမြေအမွေအနှစ်တွေကိုသိမ်းဆည်းနေတယ်၊၇။သင်တို.ကိုအမြဲဒုက္ခပေးနိုင်ဖို.နေ.မအားညမအားဗျူဟာတွေချပြီးတော့အကောင်အထည်ဖော်နေတယ်၊၈။သင်တို.၏ဘက်စုံလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ထားတယ်၊၉။သင်တို.လူမျိုးကိုဘယ်တုန်ကအကျိုးပြုခဲ့ဘူးလဲ?၁၀။သင်တို.နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖွံ.ဖြိူးတိုးတက်အောင်ဘယ်တုန်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့သလဲ?၁၁။သင်တို.လူမျိုးအချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ကြအောင်အမြဲရန်တိုက်ပေးနေတယ်၊၁၂။သင်တို.၏ဖြူစင်ရိုသားတဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအသုံးချနေတယ်၊၁၃။သင်တို.လူမျိုးတွေကိုတိုင်းပြည်မှာကောင်းကောင်းနေထိုင်လို.မရအောင်အမြဲဒုက္ခပေးနေတယ်၊၁၄။သင်တို.ကိုသမြ၊သူပုန်၊အကြမ်းဖက်သမားစသည့်မကောင်းတဲ့နာမည်တွေကိုတပ်ပေးနေတယ်၊၁၅။အာဏာရှင်တွေကြုိးကိုင်အုပ်ချုပ်နေတယ်၊၁၆။လူမျိုးမရွေ၊ဘာသာမရွေနှိပ်ကွပ်နေတယ်၊၁၇။စိတ်ဓါတ်အောက်တန်ကျပြီးယုတ်မာရက်စက်တယ်၊၁၈။စစ်တပ်ဝိနည်း၊စစ်တပ်စည်းကမ်းတွေမရှိဘူး၊၁၉။တိုင်းပြည်ကိုသစ္စာဖောက်နေတယ်၊၂၀။သစ္စာမခိုင်ကြည်၊ကတိမတည်ဘူး၊၂၁။တပ်အတွင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေတယ်၊၂၂။လိင်ဖောက်ပြန်မှုစစ်ဗိုလ်တွေရှိပြီးလိင်တူဆက်ဆံမှုရှိနေတယ်၊၂၃။လစားမလုံလောက်ဘူး၊၂၄။အောက်ငယ်သားများငတ်ပြတ်နေတယ်၊၂၅။အောက်တပ်သားများ၏သားသမီးမယာများက ဖာဖြစ်သူဖြစ်၊နိုင်ငံခြားမှာအလုပ်သွားလုပ်စားနေရသူရှိတယ်၊၂၆။စစ်ဗိုလ်ကြီးများ၏သားသမီးမယားများကစစ်တပ်ကိုအသုံးချပြီးကြီးပွားနေကြတယ်၊၂၇။တိုင်းပြည်ချစ်၊မျိုးချစ်စစ်သားတွေသိပ်မရှိဘူး၊၂၈။အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးစစ်သားတွေရှိနေတယ်၊၂၉။အတင်းအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့စစ်သားတွေများတယ်၊၃၀။စစ်သား၏ဝိဥာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးသတ္တိမရှိဘူး၊၃၁။အထက်အမိန်.ကိုကြောက်ရလို.တိုက်ခိုက်နေရတယ်၊၃၂။အချင်းချင်းဗိုလ်လုလုပ်ကြံမှုတွေရှိနေတယ်၊၃၃။လာဘ်ပေးလာဘ်ယူအကျင့်ပျက်တွေများတယ်၊၃၄။ဘုရင်နောင်၊အောင်ဇေယျ၊အနော်ရထားမင်းများကိုခုတုံလုပ်ပြီးဗမာလူမျိုးတွေကိုမျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်ဇွတ်သွင်းနေတယ်၊၃၅။ကမ္ဘာ.အလယ်မှာသိက္ခာမရှိဘူး၊နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားနေတယ်၊၃၆။အထက်ဗမာပြည်သားတွေကိုသာစစ်တပ်ဦးစီးရာထူးပေးတယ်၊၃၇။သွေးခွဲအုပ်ချုပ်နေတယ်၊၃၈။စစ်တပ်ဦးစီးချုပ်တွေကပဒေသရာဇ်စနစ်ကဲ့သို.အုပ်ချုပ်နေတယ်၊၃၉။လက်ရှိဗိုလ်သန်းရွှေကဘုရင်ရူးနေတယ်၊၄၀။စစ်ဗိုလ်တွေရဲ.သားသမီးများကသာအဆင့်မြင့်ပညာသင်ကြားနိုင်တယ်၊၄၁။တိုင်းသူပြည်သားတွေဆီကငွေကြေးတွေကိုမတရားကောက်ခံနေပြီးသမြလိုရမ်းကားနေတယ်၊့၄၂။တိုင်းပြည်ကောင်းစားရေးအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်ဆန္ဒမရှိပါ၊၄၃။တိုင်းသူပြည်သားအပေါ်ရိုသားမှုစိတ်ဓါတ်မထားရှိဘူး၊၄၄။စိတ်ဓါတ်စစ်ဆင်ရေးဗျူဟာဖြင့် အင်းအားကြီးသလိုဟန်ဆောင်ထားတယ်၊၄၅။စစ်တပ်အင်းအားဖော်ပြထားသလောက်မရှိပါ၊၄၆။ငြိမ်ချမ်းရေးမလိုလာဘူး၊၄၇။ပြည်သူလူထုတွေနဲ.စစ်မျက်နှာဖွင့်ထားတယ်၊စသဖြင့် အကောင်းမရှိတဲ့စစ်တပ်ကိုတပ်မတော်လို.နာမည်ခံပြီးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာစစ်တပ်တစ်ခုသာရှိရမည်ဆိုပြီးသင်တို. ကိုငရဲကြီးအဝိစီဆီသို.ခေါ်သွားဖို.ကြံစည်းနေတယ်၊
ဒီလိုစစ်တပ်မျိုးကိုတိုက်ဖျက်ဖို.ကသင်တို.မှာတာဝန်ရှိတယ်၊ဗမာစစ်တပ်လက်အောက်မှာသင်တို.နေထိုင်ဖို.မလိုဘူး၊နယ်ခြား စောင့်တပ်လုပ်ဖို.မလိုဘူး၊သူတို.ကိုတိုက်လို.သေဆုံးသွားရင်ကောင်းရာလမ်းကြောင်းကိုဘဲသင်တို.ရောက်ရှိသွားမှာသေချာ တယ်၊ဒီစစ်တပ်ကိုသင်တို.အခုပစ္စုပန်မတိုက်ဖျက်ရင် သင်တို.၏နောက်လာနောက်သားများအဆက်ဆက်ဒီနေ.အလာတူ သို. မဟုတ် ဒီနေ.ထက်ပိုပြီး အထက်ပါအချက်များ၏ဆိုးကျိုးများကိုခံစားနေရအုံမယ်၊ရန်သူနဲ.ပူးပေါင်းမည့်အစားသင်တို.၏လူထု နဲ.ပူးပေါင်းပြီး ထိုးစစ်ဆင်ရမည်၊သူတို.ကိုဖက်ဆစ်စစ်တပ်၊ဖက်ဆစ်အစိုးရအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဝိုင်းတိုက်ရမယ်၊တစ်သက်လုံးမ ယုံနဲ.၊ရန်သူအဖြစ်အမြဲသတ်မှတ်ပါ၊သင်တို.၏လူမျိုးလွတ်မြောက်ရေးနှင့်တိုင်းသူပြည်သားများအတွက်လွတ်လပ်သောလူအခွင့်အရေး၊ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးတွေကိုဦးစားပေးပြီးကမ္ဘာတိုင်းပြည်များနဲ.ဆက်ဆံရေးလုပ်ပါ၊သံတမန်နည်းများမြှင့်တင်ရမယ်၊တိတ်တဆိတ်လူမျိုးသတ်ဖြတ်ဖြုံးတီးမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ပါ၊စစ်ရေးအကူအညီတွေကိုရယူပါ၊စစ်တပ်ရေးဆွဲထားတဲ့ အခြေခံဥပဒေကိုသင်တို.အခြေခံဥပဒေမဟုတ်ဘူး၊သူတို.ဥပဒေသူတို.လေစားခိုင်းပါ၊သူတို.ပြုလုပ်မည့်ရွေကောက်ပွဲကသင်တို. ရွေကောက်ပွဲမဟုတ်ဘူး၊တက်လာမည့်အစိုးရအသစ်ကလည်းသင်တို.အစိုးရမဟုတ်ဘူး၊သင်တို.အစိုးရသင်တို.ဘာသာဖန်းတီး ရမယ်၊သင်တို.မြေမှာသူတို.နေတယ်၊ကျူးကျော်သိမ်းပိုက်ထားတယ်၊သင်တို.ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုနဲ.သူတို.ဘာသာစကား ယဉ်ကျေးမှုမတူကြဘူး၊ဒါကြောင့်၊ သင်တို.ကိုကျွန်းပြုထားတယ်၊အသိအမှတ်ဘယ်တော့မှမပြုဘူး၊
ထို.ကြောင့်၊ သင်တို.အတွက်နယ်ခြားစောင့်တပ်စကားနာမယောင်နဲ.၊ရွေကောက်ပွဲအကြောင်းဘက်မစောင်းနဲ.၊ငြိမ်ချမ်းရေးစ ကားဘေးဖယ်ထားပါ၊ဆွေးနွေးပွဲစကားဝိုင်ထိုင်မစောင့်နဲ.၊ဖက်ဆစ်အစိုးရကိုဝိုင်းချကြပါ၊ငြိမ်ချမ်းရေးဆိုတာအင်းအားမျှမှတည် ဆောက်လို.ရတယ်၊အပြောင်းအလဲဆိုတာအင်းအားသုံးမှဖြစ်မယ်၊စစ်မီးလောင်ကျွမ်းခြင်းကိုဘယ်သူမှမလိုလာအားမပေးကြဘူး၊သို.သော်၊ကိုယ့်လူမျိုးဘာသာ၊သာသနာကိုကာကွယ်ဖို.က လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိတယ်၊မလွဲမရှောင်နိုင်လို.သာဆင်နွဲရမည့်စစ်ပွဲဆိုရင်တရားတဲ့စစ်ပွဲလို.စစ်ရေးပညာရှင်တို.ဆိုကြပေသည်၊